Akụkọ - Ndị na-ewu ewu na-ewu ewu na-eyi uwe ụmụ nwanyị kachasị ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị US
Site na: 25nke February 2021 Scarlett Conlon, CNN
(Ebe E Si Nweta: Andrew Harnik / AP)
E nwere oge n'ime ọrụ onye ọ bụla rụpụtara nke ọma mgbe ha chọtara ihe ha mepụtara n'etiti etiti nje. Maka onye nduzi okike Max Mara, Ian Griffiths, na-achọpụta na Ọkà Okwu nke Nanlọ Nancy Pelosi agbaghala ọgba aghara ụwa site na iyi uwe uhie ya "Fire Coat" maka aha ọjọọ ya na Donald Trump na 2018 bụ otu n'ime oge ndị ahụ. Otú ọ dị, ọ bụghị otú ọ chere n'echiche.
“Ọ bụ 7 mgbede ka m nwetara oku ekwentị site na ụlọ ọrụ nkwukọrịta anyị America. Aka m si n’ụlọ ọrụ lọta, anọ m n’etiti ịbụ onye gbanwere traụza m na ikpere m, ”ka Griffiths na-achị ọchị site n’ọfịs ya na Reggio Emilia, n’ebe ugwu Italytali. “Ha chọrọ nkwenye ngwa ngwa na uwe ahụ bụ nke anyị, mgbe ahụ ọtụtụ oku na-abịa inye nkwuputa. Anọ m na-eme mgbagharị na mgbede ahụ dum na-eji ịnyịnya m gburugburu nkwonkwo ụkwụ m n'ihi na enweghị m oge iji wepụ ha!
Nke ahụ na-eme ka ị mata otu esi eme ihe na-acha anụnụ anụnụ. ”
Oge ahụ nwere ike ijidela Griffiths na ala, ma Max Mara abụghị nhọrọ aka ekpe maka Pelosi, bụ onye yiworo otu uwe ahụ na ntinye nke abụọ nke President Obama na 2013. Akara Italiantali, nke a maara maka kamel ya kootu ma gosi akara ncheta afọ iri asaa nke afọ a, abụkarị maka "ịme ezigbo uwe maka ụmụ nwanyị n'ezie," Griffiths amụrụ Britain, bụ onye sonyere aha ahụ ozugbo n'ụlọ akwụkwọ na 1987 wee nọrọ ebe ahụ kemgbe.
(Nancy Pelosi yi Max Mara. Ebe E Si Nweta: Marvin Joseph / The Washington Post / Getty Images)
Onye mmebe ahụ chetara nzukọ mbubata na onye mbubata akara ahụ, Achille Maramotti: “Ọ gwara m (ya) ebumnuche ya bụ iyi nwunye nke dọkịta ma ọ bụ ọka iwu obodo ahụ mgbe niile; ọ nweghị mmasị na uwe ụmụ eze ma ọ bụ ụmụ nwanyị na Rome. Ọ họọrọ n'ụzọ amamihe dị na ya n'ihi na n'ime afọ 70 gara aga, ndị inyom ahụ (ebilila) na Max Mara soro ha. Ugbu a karịa nwunye dọkịta, ha bụ dọkịta, ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye nduzi nke ntụkwasị obi ahụike niile. “
(Anndị Britannic nke nwere ụda olu ndị ,tali, ihe nnabata Max21 nke Max Mara bụ maka “ndị eze nwanyị ji aka ha mee,” ka ihe ngosi a na-ede.
Griffiths nwere ike ịgụ Kamala Harris n'etiti ụmụ nwanyị na-efe efe na-asọpụrụ maka ihe okike ya. Onye osote onye isi ala nke United States mere akụkọ maka ika ahụ na Nọvemba gara aga mgbe a na-ese ya foto na-eyi otu uwe ojii isi awọ ya nke sitere n'ike mmụọ nsọ "Deborah" na ụzọ mgbasa ozi na Philadelphia.
Griffiths kwuru, "Ọ dịka onye si na Agha nke Onwe Onwe nke America, yana ọkọlọtọ dị n'azụ ma bulie ogwe aka ya na ikuku… ọ bụ onyogho dị ike," Ma Harris na Pelosi, ọ gara n'ihu, “ọ dị ka ọ bụghị naanị na ha na-eyi (uwe mkpuchi) dị ka ihe bara uru, kama n'ụzọ nke mere nkwupụta (na) dị ka ụgbọala iji kwuo ihe m kwenyere kpamkpam." Ọ bụ, ọ kwetara, na-akwụghachi ụgwọ ọrụ.
(Onye isi oche Kamala Harris na-ekwu okwu n'oge a na-anya ụgbọala na-apụ ịtụ vootu na Philadelphia, 2020. Ebe E Si Nweta: Michael Perez / AP)
Ememe ihe nketa
Griffiths na-ekwenye na akara ngosi akara ngosi nke afọ a site na ịtụ ụtụ nye ụmụ nwanyị siri ike, nọọrọ onwe ha dịka Harris na Pelosi. N'ikwekọ na ọhụụ mbụ nke Maramotti, ọ nwere ike ọ gaghị eche banyere eze ọ bụla, mana ọ bu n'obi ịme uwe iji nye ụmụ nwanyị ike ịchị ụwa.
O yiri ka ọ dabara adaba na Griffiths na-enyere Max Mara aka maka ụbọchị ncheta afọ 70 ya na nchịkọta ncheta pụrụ iche. Ekpughere dijitalụ na Milan Ejiji izu Tọzdee, Fall-Winter 2021 akara dị ka ike dịka mmadụ si atụ anya na aha ndị Italy.
“N’ememe ihe omume a dị oke egwu, a na m eche maka nwanyị Max Mara dịka onye mmeri nke mere onwe ya eze n’oge n’abụ ọrịrị mgbe ọ rịgoro,” ka ọ masịrị.
Ihe ngosi dijitalụ malitere ya na onyogho nke ihe nlere dika ihe eji etinye aka na uwe Max Mara tupu o were uzo di okirikiri banye na Triennale di Milano. Nnukwu oghere dị egwu, nke chetara Griffiths nke London's Regent Street, ka edobere na ọkọlọtọ nwere akara ngosi sitere na ebe nchekwa akara ahụ iji nye ekpomeekpo ma ọ bụ usoro ọhụụ. Otu n'ime akara ndị ahụ bụ ihe ịtụgharị uche na onye nrụpụta ahụpụtara na 1950s Max Mara na-akpọsa mgbasa ozi site na Archive nke ika ahụ
Ihe nnọchianya ahụ "na-ejide mmụọ niile nke nchịkọta ahụ," ka o kwuru. “Olee (ọzọ) olee otú i si kọwaa echiche obi ụtọ na ọ epụ nke njem a afọ 70 a rịgoro?”
Ebe ọ bụ na mmalite ya na 1951, Max Mara nwere ịhụnanya maka ihe niile "n'ụzọ ziri ezi - nke nwere oke ala - Britain," ka Griffiths kwukwara. Maka nchịkọta a, ọ na-ele anya n'ịkwọ ụgbọ ala traktọ, na-anya ụgbọ helikọpta, ụmụ nwanyị na-asụ ụzọ site na kilts ("ọdịnala mana agbakwunyere na omenala punk"); Uwe mkpuchi a na-eji ajị kamel dị ọcha eme; Jaketị ndị eji eme ihe eji eme ihe na alpaca sumptuous; organza uwe elu “nke bụ n'ụzọ dị egwu jaunty”; na sọks chunky na akpụkpọ ụkwụ na-eje ije.
(Dị ka ihe ngosi ahụ si kwuo, nchịkọta ahụ bụ "obodo mepere emepe-mix" nke na-eme ka mkpuchi aran na sket sket skirts. Ebe E Si Nweta: Max Mara)
Ọ bụ nchịkọta nke "ndị ochie na-akwadoghị," ka ọ kọwara, nke bụkwa nkọwa dabara adaba nke onye nhazi ahụ n'onwe ya. Akụkụ mmụọ nweere onwe ya, nwa nwoke dị ezigbo mkpa, Griffiths bụ nwa klọb kpụburu akpụ wee bụrụ ọchịagha okike nke otu n'ime ụlọ ndị kacha ochie n'ụwa, nke kachasị dị oke ọnụ - ma nwee ọmarịcha mmasị maka ogige. Nyere na o mefuru mkpọchi Covid-19 nke UK n'ụlọ ya na ime obodo Suffolk, ihe nnabata bucolic ya pụtara karịa nke onwe.
“Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ọtụtụ akụkọ m na-abanye ebe ahụ,” ka o kwuru, na-atụ aka na foto ndị na-adịbeghị anya na akaụntụ Instagram ya. “Onyogho ndị ahụ nke ahụmịhe m nọ n’ime obodo n’oge ọkọchị, iso ndị nkịta m na-eme ogologo oge, etu m siri eji ejiji afọ iri atọ gara aga, omenaala ndị punk, echiche nke mmụọ nnupụisi nọọrọ onwe ha, na-ajụ ịnabata mgbakọ - ha niile bụcha echiche ndị bụ isi n’echiche m. Otú ọ dị, n'ụzọ bụ isi, ana m enyefe ya ka o nwee mmasị n'ebe nwanyị Max Mara nọ, n'ihi na ọ bụ ihe metụtara ya. ”
(Mkpokọta ọhụụ egosiri na Milan Fashion Week na-egosipụtakwa uwe mara mma Max Mara. Ebe E Si Nweta: Max Mara)
Mmetụta ọrịa ahụ metụtara ndị ahịa Max Mara bụkwa ihe dị mkpa, Griffiths kwuru.
Ọ sịrị: “O meela ka m chee echiche nke ọma banyere onye (ọ bụ) ma nwee ekele maka ọtụtụ ọgụ ndị ọ gabigarala, bụ nke ihe ndị mere n’afọ gara aga tụbara n’ime nnukwu enyemaka. Achọrọ m igosi ya ka ọ na-apụta site na nsogbu a mmeri.
"Ọ bụ emume anyị nke afọ iri asaa mana ọ bụkwa nchịkọta nke emere maka oge oyi ọzọ, 2021, mgbe ụwa niile, mgbochi ga-amalite iwepụ ma ndị mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ụwa ha bi na ya."
Nchịkọta na-abịanụ bụ, ka o kwenyesiri ike, "ememe okpukpu abụọ, n'echiche". Na ịnụ ọkụ n'obi Griffiths maka imewe, okwu mmalite na olile anya, Max Mara nwekwara ọtụtụ ihe ị ga-eme,